Tesla Reports Profit for Quarter, Sending Shares Soaring | Myanmar Business Today
HomeMMBIZ NewsTesla Reports Profit for Quarter, Sending Shares Soaring
FILE -- The Model3assembly line, underatent, at Tesla's factory in Fremont, Calif., June 28, 2018. Tesla surprised Wall Street on Oct. 23, 2019, by reporting $143 million in net income in the third quarter as cost reductions more than offsetaslight decline in revenue. (Justin Kaneps/The New York Times)
Vol ,7Issue 43
Neal E. Boudette (The New York Times) https://www.nytimes.com/2019/10/23/business/tesla-earnings.html
And they did. The news sent Tesla’s shares up about 20% after the close of regular trading.
Musk offered an upbeat outlook. By the end of the year, he said, Tesla should begin production atafactory in Shanghai and announce the location ofaplant to be built in Europe.
Musk predicted that the Model Y would surpass the combined sales of Tesla’s current vehicles — the Models 3, S and X — and generate better margins than the Model 3.
“The profit and cash flow numbers look unexpectedly good,” Gordon said. “The cash flow is especially important because there were concerns about the company’s financial position.”
Before the earnings report Wednesday, Tesla’s stock closed at $255, down about 18% since the beginning of the year. Tesla still hadamarket value of $46 billion, about $10 billion more than Ford Motor.
လအတန်ကြာက Tesla မှာ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရရှိရန် ရုန်းကန်နေရပြီး စတိုးဆိုင်များ ပိတ်ရသည်။ ရောင်းအား ကျဆင်းမှုများနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။
သို့သော ကုန်ကျစရိတ်များ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကားထုတ်လုပ်မုများ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အရံအဖြစ်ထားရှိရန် လိုအပ်သော ငွေကြားများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပုံရသည်။
လျှုပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Tesla ၏ အခြေအနေကောင်းသော အနေအထားမှာ ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထုတ်ပြန်သော ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တွေ့ရှိရသည်။ တတိယ သုံးပတ် ကာလအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၃ သန်း ရှိခဲ့ရာ လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏ အဆုံး ပေါ်မည်ဆိုသည့် အချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
ပြင်ဆင်ထားပြီးသော အစုရှယ်ယာတစ်စုအမြတ်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၈၆ ဒေါ်လာရှိသည်ဟု Tesla က ဆိုသည်။ သုံးလပတ်ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ဒသမ၃ ဘီလီယံ ရှိခဲ့သည်။
လေ့လာသုံးသပ်သူများကတော့ Tesla အနေဖြင့် အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၆ဆင့် အရှုံးပေါ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ဒသမ၄ ဘီလီယံရှိမည် ဟုတ်ခန့်မှန်းထားသည်။
“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ ဒီရလဒ်ကို ကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်”ဟု မစ်ချီဂန်တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေး ပါမောက္ခ Erik Gordon က ပြောသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကလည်း သဘောကျကြပါသည်။ အဆိုပါသတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တွင် Tesla ၏ အစုရှယ်ယာများမှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်နှစ်ခုတွင် Tesla သည် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ ၁ ဘီလီယံ အရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ အမြတ်အစွန်းအများအပြား ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမှာ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းထဲမှ များပြားသော ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချလိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နောက်မော်ဒယ်အသစ်ဖြစ်သော Model Y ကို လာမည့် နွေရာသီတွင် စတင် ထုတ်လုပ်ရန် စီစဥ်ထားသည်။ အဆိုပါ အချိန်အတိုင်းအတာမှာ မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ခြောက်လမျှ စောပါသည်။
Model Y ၏ ရောင်းအားသည် Tesla ၏ လက်ရှိ မော်တော်ယာဥ်များ၏ ရောင်းအား စုစုပေါင်းထက်ပင် ကျော်လွန်မည်ဖြစ်ကာ အမြတ်အစွန်းတွင်လည်း Model3ထက် ပိုမို အမြတ်အစွန်း ရရှိနိုင်ကြောင်း Musk က ခန့်မှန်းသည်။
လာမည့် နှစ်ကုန်တွင် Tesla သည် လုံခြုံစိတ်ချရသော အလိုအလျောက် ကားမောင်းသည့် နည်းပညာကို စတစ် မိတ်ဆက်နိုင်မည်ဟုလည်း ၎င်းကဆိုသည်။ သို့သော် အစိုးရပိုင်းအနေဖြင့် အလိုအလျောက် မော်‌တော်ယာဥ် မောင်းနှင်ခြင်းအတွက် နည်းပညာ၏ အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကို လိုက်မီနိုင်မှု မရှိနိုင်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်သည် ပြီးခဲ့သည့် သုံးလပတ်အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈၅ သန်းရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ ပမာဏမှာ ဒုတိယသုံးလပတ်က သုံးစွဲခဲ့သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ ထက် များပြားသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ကာလတူ သုံးလပတ်က သုံးစွဲခဲ့သည့် အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၅၁၀ သန်းထက်တော့ နည်းပါးကြောင်း Tesla က ဆိုသည်။
ထို့အတူ လက်ထဲရှိ ငွေကြေးပမာဏမှာလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ဒသမ ၃ ဘီလီယံ အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းမြင့်တက်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၈၃ သန်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ တတိယ သုံးလပတ်အတွင်းတွင် မော်တော်ယာဥ် အစီးရေ ၉၇၀၀၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယသုံးလပတ်က တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည့် မော်တော်ယာဥ် အစီးရေး ၉၅၀၀၀ ထက် မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
Previous articleGoing Overboard? Shipping Rules Seen Shifting Pollution From Air to Sea
Next articleMcDonald’s Misses Profit Target as Competition Delivers Breakfast, Plant Burgers